Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) Q2aad | Warsugan News
Home Maqaalo Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) Q2aad
Door-roonihii Da’dii aan ogaa: Mujaahid Maxamed Ibraahin Xirsi (Bashiir) (1956kii – 1987kii) Q2aad
1.	In halganka loo wareejiyo dalka gudihiisa,
2.	In qaabka dagaalku noqdo mid dadweyne oo aan loo iilan ka dagaalka nidaamiga ah ee millateri,
Kaftanno badan oo maadeed ayaa ka dhacay qaababkan dagaal iyo sidii la isugu maan-dhaafsanaa. Abiib-dhagax oo ka mid ah aasasayaashii Guutadii 4aad ee unugga u ahayd ciidammadii xoreynta ee SNM ayaa maalin hawl-gal loo diray meel aan ka fogeyn Gadhka-yogol. Sarkaal aan u malaynayo in uu ahaa Ina Biixi ayaa u dhiibay ‘kaartadii’ dagaalka oo sawiran. Mujaahid Abiib-dhagax oo ciidanka duulayay kaxaysanayay, ayuu ku yidhi: “Laagtaa ma aragtaa? Xabbad miino ah ayaa ku jirta ee iska ilaali.” Mujaahidku ‘kaarto’ iyo warkeed maqal mooyaan e’, ma uu arag. Sahanka wuu dirtaa, waajibaadkana wuu gutaa. Sidaas ayuu u yaqaannaa dagaalka. Mujaahid Abiib oo sawirkan la hor dhigay ka yaabban, ayaa Muuse ku yidhi: “Horto miinadan aad sheegayso meesha ka saar.” Wixii meesha joogayba, qosol ayay jaanta wadheen.
Is-maan-dhaafyadii ciidanka iyo saraakiishii millateriga waxa kale oo aan ka xusuustaa dhacdo aan goob-joog ka ahaa annaga oo ku sugnayn Tuulada Gob-yarrey oo ah Tuulada ugu xigta Wajaale marka xagga Jigjiga lagu socdo. Waa xilli ku beegnaa 21kii Oktoobar, 1982kii. Waxay ahayd gelin danbe. Ciidammo ka tirsanaa Gutadii 4aad ee Gaaskii Axmed Gurey oo ahayd unuggii iyo aasaaskii ciidammada xoreynta ee SNM ayaa weerar u darbanayd. Korneyl Aadan Saleebaan Cabdi ayaa xaashi ballaadahan oo ‘filip chart’ ahayd u dhiibay Axmed Sheekh Faarax, Dhuxul, oo ciidanka sii kaxaysanayay. Sida dhaqanku yahay, ‘kaartadaa’ waxa ku sawirnaa awoodda cadowga oo lahayd: Jiibab, Madaafiic, Beebbeeyo iyo taangiyo wixii uu cadawgu haystay ama lahaaba.
Taliye Axmed Sheekh Faarax, Dhuxul oo aan waxan oo kale hore u arag ayaa yidhi: “Ciidanka ayaa kaxaysanaya?” Waxa loogu jawaabay: “Adiga.” Axmed Sheekh Faarax, Dhuxul, ayaa intaa ka dib yidhi: “Sahankayga aniga ayaa diranaya, qaabka aan u dagaal-gelayana aniga ayaa samaysanaya ee ha la ii sheego keliya waxa loo baahan yahay in la sameeyo ama hawl-galkan lagu fuliyo.” Dhuxul maalintaa qaab-dagaaleedkii loo sawiray waxa ku caddaa in uu magaalada Tog-wajaale saddex jiho ka weeraro. Galbeed oo ahayd in uu xaggan Jigjiga kaga tago, xagga Magaalo-cad in uu kaga yimaaddo iyo dhinaca Geed-ballaadh. Dhuxul, wuxu u sheegay nimankii saraakiisha ahaa in dhinacan Jigjiga soo xigaa miinaysan yahay. Dhuxul maalintaa wuxu go’aansaday dhinaca saddexaad ee uu Wajaale ka soo gelayaa in ay noqoto xagga Kalabaydh oo weliba uu isagu unuggaa ku soo hoggaamiyo Tog-wajaale, sidiina waa uu yeelay.
Wax waliba barashadiisa ayuu leeyahay e’, duruuftii cusbayd ee jabhadnimo ayaa qasabtay in la irkado ama loo iisho qaab-dagaaleedkii dadweyne (Guerilla), saraakiil badan oo kulliyadihii ciidammada ka soo baxdayna waxay noqdeen Mujaahidiin curis iyo hal-abuurba leh.
Previous PostMaantana, inaad Moorganoow maagtay lagu sheeg Qalinkii Mujaahid Maxamuud-Tallaabo Next PostXukuumadda Somaliland ayaa jawaab adag ka bixisay hadal gar-darro ay ku sifeysay oo ka soo yeedhay Maamul goboleedka Soomaliya ee Puntland